Faah faahino ka soo baxaya qarax ka dhacay degmada Howlwadaag | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faah faahino ka soo baxaya qarax ka dhacay degmada Howlwadaag
Faah faahino ka soo baxaya qarax ka dhacay degmada Howlwadaag
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan qarax geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaas oo Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho, sidoo kalena laga maqlay degmooyinka Gobolka Banaadir.
Wararka laga helayo qaraxa waxaa ay sheegayaan in uu ahaa Haweeney isku so xirtay waxyaabaha qarxa, isla markaana isku qarxisay Ciidamo ka tirsan NISA qeybta loo yaqaano ilaalada shacabka, xilli ay ku sugnaayeen meel u dhow Isgoyska Daalo ee degmada Howl-Wadaag.
Sidoo kale goobjoogayaal ayaa waxaa ay xaqiijiyeen dhimashada qaraxaasi lab Ruux oo kala ah Sarkaal ka tirsan Ciidanka NISA oo magaciisa lagu soo koobay Caana-Geel iyo haweeneyda is qarxisay iyo dhaawacyada ilaa Sddex Ruux, kuwaas oo loo qaaday mid kamid ah Isbitaallada Muqdisho.
Dhanka kale ciidamo Boolis ah ayaa tegay halka uu qaraxa ka dhacay, kuwaas oo muddo saacad ka badan hakiyay isku socodka dadka iyo Gaadiidka walow markii dambe ay dib u fureen.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayey falal ammaan darri, sida qaraxyo iyo dilal qorsheysan intaba.
Maqaal horeMaxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay Askari kufsi geystay
Maqaal XigaMaareeyey oo ka tacsiyeeyey geerida Wariye Cabduqaadir Maxamed Mursal